भारतीय सञ्चार माध्यमको प्रलाप : चीनलाई तारो – Chitwan Post
This image shows new political map of Nepal integrating Kalapani region which has been encroached by India. Nepal Communit Party (NCP) General Secretary shared the image of the map released by the government of Nepal
आन्तरिक स्वीकारोक्तिका लागि संविधान संशोधनबाट नक्सालाई थप बलियो आधार प्रदान गर्ने विषय हाललाई कुनै कारणवस रोकिएपछि भारतीय सञ्चारमा खुसीको रौनक छाउन सुरू भइसकेको छ । भारतीय सञ्चारले यस विषयलाई पनि बङ्ग्याएर– “नक्सा विवादमा नेपाल पछि हट्यो” (नक्सा विवाद में नेपाल पिछे हटा) लगायतका प्रमुख समाचार आइसकेका छन् । यद्यपि यो विषय किन र केका लागि रोकियो भन्ने यकिन आम जनमानसमा नभए पनि केही राम्रैका लागि रोकिएको भन्नेमा नेपाली जनताको एक हिसाबमा विश्वास अवश्य छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालले अद्यावधिक गरेको नक्साका विषयलाई विषयान्तर बनाएर अथ्र्याइरहेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यममध्येको “दि डिबेट” कार्यक्रममा भारतीय पत्रकार अर्नव गोसामीले खुलेरै चीनमाथि आरोप लगाएको प्रष्ट देखिन्छ । सीमाका विषयमा भएको उक्त वार्तामा नेपालका तर्पmबाट सहभागीमध्येका काङ्ग्रेस सांसद् डा. मिनेन्द्र रिजाललाई बोल्नै नदिएर प्रतिप्रश्नको घोचो तेस्र्याएर आफ्नै अन्तरवेदनालाई ओकले । नेपाली आम जनमानसले नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक विवाद जेजस्तो भए पनि राष्ट्रियताका सवालमा डा. रिजालको प्रशंसा भएको छ । यद्यपि, गोसामीको पूर्वाग्रही प्रश्नमा देखिएको रबैयाले सानो मुलुकका मान्छेलाई जसरी बोले पनि हुन्छ भन्ने पेल्ने बुद्धिको मनोविज्ञानलाई सङ्केत गर्छ ।
अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफ्नो देशप्रति राखेको शालीन राष्ट्रप्रेमको ट्वीटले जगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमको चिच्याहट उस्तै टिठलाग्दो बन्यो : “भारतका खाओगी, चीनका गाना गाओगी ?” उता भारतका सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवानेले “नेपालले कसैको इसारामा लिपुलेकको मुद्दा उचालेको” पदीय मर्यादाभन्दा बाहिरको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । यस मानेमा भारतले नेपालमा बाम विचारधारा भएको सरकार भएकाले वाम सिद्धान्तमा चल्ने छिमेकी देश चीनलाई तारो बनाउनु विषाद्पूर्ण छ । चीनको समर्थन र साथले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने हिम्मत गरेको हो भन्ने कपोलकल्पित धारणा राख्ने हो भने यो सीमा समस्यामा निकासभन्दा बढी भ्रमलाई बढावा दिन्छ । यो भारतीय सञ्चार माध्यमले सोच्नुपर्ने विषय हो ।
भारतलाई थाहा छ– नेपालसँग उक्त भूमि आफ्नै हो भन्ने प्रशस्त र दर्बिला प्रमाण छन् । नेपालले आफ्नो भूमिलाई फिर्ता माग्नु जायज पनि हो भने अब अर्को बल्छी कसरी थाप्ने भन्ने दाउपेचमा चीनलाई तारो बनाइएको देखिन्छ । तर, भारतका विचारकहरूले सीमाका विषयमा सकारात्मक छलफल नहुनुको तर्कलाई पेस गरिरहेका पनि छन् । यसर्थ, नेपालले आन्तरिक हिसाबमा सर्वदलीय समर्थन भइरहे पनि एउटै आवाज तथा एउटै तथ्य पेस गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सञ्चार माध्यममा सहभागी हुने कुरामा पनि जहाँ हाम्रो सम्मान हुँदैन, त्यहाँ हाम्रा नेताज्यूहरूले सामेल नहुनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरेको नक्साका विरुद्धमा भारतीय सञ्चार माध्यमले अतिरञ्जित तानाबाना बुन्नुको तात्पर्य के हो त ? यो एउटा अस्त्रमा हालेर नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिस्यान भर्न खोजेको पनि देखिन्छ । अझ चीनको आडमा नेपालले उक्सिएर यो काम गर्ने आँट गरेको झुटो प्रोपागान्डा पैmलाइरहँदा हामी नेपालीले स्पष्ट भन्नुपर्छ : हामी कसैले उचाल्दा उचालिने र कसैको आडमा बुई चढेर हिन्ने मुलुक होइनौँ । दुई ठूला देशका बिचमा हामी अवश्य छौँ र दुवै देशमा समदूरी कायम गरेर हामी जिउँछौँ । हामी हाम्रै स्वेच्छिक निर्णयमा काम गर्छौँ । हो, हामी भौतिक र आर्थिक हिसाबमा सबल नहौँला तर हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान सधैँ उँचो छ ।
नेपाल सरकारले नक्सा अद्यावधिक गरेर निसाना छापदेखि नेपालका सबै कार्यालय तथा शैक्षिक क्षेत्र, सूचना तथा सञ्चारमा यही नक्सालाई प्रयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिनेबारेमा समेत आन्तरिक स्वीकारोक्तिको आधार बनिरहेको छ । यो सरकारको अत्यन्तै सह्राहनीय कदम हो । प्रशंसनीय कार्य हो । अब भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा यो सीमा समस्याका विषयमा दीर्घकालीन निकास खोज्ने काम गर्नुहुँदा मात्रै एउटा स्वर्णिम ऐतिहासिक गरिमा स्थापित हुने देखिन्छ । यद्यपि नेपालले आफ्नै भूमि रक्षार्थ विगतदेखि नै जाँगर नचलाउनुको परिणाम आजसम्म हामीले भोगिरहेका छौँ । भावी पिँढीले यस्ता समस्या नभोगून् भन्ने कदममा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालले सिमानामा नेपाली सैनिक बुथ राख्न सकेन । त्यहाँ नेपाली जनता पुग्नै सकेनौँ तब भारतले नेपाली भूमिमा रजाइँ गरिरह्यो । यद्यपि वर्तमान सरकारको यस कदमलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर, यो राष्ट्रिय गरिमासँग जोडिएको विषय भएकाले राजनीतिक एजेन्डा र चुनावी नारा बन्नु स्वार्थपूर्ण हुन सक्छ । यसले आन्तरिक किचलो मच्चिनु अर्को घातक प्रवृत्ति हुन्छ । यो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि त सर्वदलीय एकताद्वारा आन्तरिक राजनीतिमा बलियो जग बस्नु आवश्यक छ ।
सन् १९५४ मा भएको चीन–भारतको ‘तिब्बत सन्धि’ मा धार्मिक पर्यटन तथा व्यापारिक बिन्दुका रूपमा लिपुलेकलाई तय गरिएको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमले एकोहोरो प्रलापको उद्दण्डमा हामी फस्नु किमार्थ बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन । कोरोना संकटको समयावधिमै भारतले नेपाललाई एक शब्द नसोधी उद्घाटन ग¥यो । यसबाट एक हिसाबले गुपचुप राख्ने उसको भूराजनीतिको आफ्नै शैली उदाङ्गो भएको छ । उता चीनले दुई देशीय समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन भनिसकेपछि पनि भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा ¥याल काढिरहेको छ ।
त्यत्रो २२ गुणा ठूलो देशले नेपालको ३९५ वर्गकिलोमिटर भूमिमा विस्तारवादकै स्वभाव देखाइरहेको छ । अद्यावधिक भएको नक्सा स्वीकार गर्न नसक्दाको हिक्काले उसलाई उठी सुख र बसी सुख भइरहेको बोध हुन्छ । साथमा भ्रमरूपी उत्तम बल्छीको नाटक रचिन सुरू भयो । नेपालीहरूलाई चीनले बुई चढायो भनिँदै छ । विसं २०३२ देखि चुपचाप बसेका नेपालीहरू यही कारणले अहिले जुर्मुराए भन्ने भ्रामक समाचारले भारतीय नागरिकमा नेपालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक बनाउने जाल बिच्छ्याएका छन् । यद्यपि केही निष्पक्ष भारतीय सञ्चार माध्यम तथा केही यथार्थ अध्येताहरूले निकालेको निष्कर्षमा उक्त भूमि नेपालकै हो भन्ने तथ्य पेस नभएका पनि होइनन् । भारतका ठूला–ठूला अध्येताहरूले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो भन्ने कुरालाई खुलेर बोलिरहँदा भारतीय राजनीतिको अर्कोतिर प्रहार भएको देखिन्छ ।
आपसी छिमेकको ऐतिहासिक सम्बन्ध र कोरोना सङ्क्रमणको जटिलता दुईवटै संवेदनशील विषय हुन् । तर, भूगोल सानो हुँदैमा सानो मुलुकको सार्वभौमिकतालाई सानो ठान्नु स्वीकार्य हुँदैन । प्रश्न– वाक्युद्ध गर्ने कि प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक निकास खोज्ने भन्ने हो । शब्द प्रहार र वाक्युद्धले सम्बन्धमा चिसिन सक्छ । यस कुरालाई भारतीय सञ्चार माध्यममा चर्चा हुँदै आइरहेका पनि छन् । तथापि, वाक्युद्ध गरेर अतिरञ्जित व्याख्याका पछि लाग्नु किमार्थ हाम्रो स्वाभिमानी अस्तित्व रक्षाको बाटो हुँदै होइन । नेपाल सरकारले अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्सालाई भारतले अस्वीकार्य छ किन भन्छ ? भारतलाई आफ्नो सेना त्यहाँबाट हटाउँदा आफ्नो इज्जतमा दाग पो लाग्ने हो कि भन्नेमात्रै पीर हुनुपर्छ । बाहिरी रूपमा जतिसुकै स्वीकार गर्न गाह्रो माने पनि भारतीय नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो भूमि सदियौँदेखि नेपालकै भूमि हो । लिम्पियाधुराबाट बगेर जाने कालीनदी नै नेपाल र भारतको सिमाना हो । मात्र स्वीकारोक्तिको प्रक्रियाको आवश्यकता रहेको छ । यसर्थ भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा गरिएको भ्रमको सञ्जाललाई चिर्ने गरी नेपाली कूटनीतिको बाटो तय गरिनु आवश्यक छ ।
नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने गरी नेपालले अबको मार्गलाई चयन गर्नुपर्छ । कूटनीतिक मार्गका आधारमा नेपाल सरकारले छलफलकै बाटोलाई अपनाउन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगै टेलिफोन वार्ता वा भिडियो सम्पर्कको माध्यमलाई प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु राम्रो हुन्छ । यसका अतिरिक्त चीन सरकारसँग पनि रहेर त्रिदेशीय भूमिकामा यो समस्या हल गर्ने हो भने भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरिने देखिन्छ । भारतीय क्षेत्रसँग सीमा गाँसिएका नेपालका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा भएका सीमा विवादका विषय रहेकाले दुई देशको सीमा समाधानका लागि गहन छलफल तथा आधिकारिक निकासको आवश्यकता छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यममा चर्का चर्का कुरा गर्दै चीनले नेपाललाई कुन समयमा के ग¥यो भन्ने भ्रामक व्याख्या र झुटा तथ्यलाई बटुलेर अग्रभागमा राख्न थालिएको छ । यो भारतीय रणनीतिको एउटा जाल हो । यसमा नेपालीहरू फस्नु किमार्थ आवश्यक छैन । हाम्रा लागि चीन र भारत दुवै बराबरी सम्बन्ध राख्ने उत्तिकै प्रिय छिमेकी हुन् । चाहे भारतसँग रोटी–बेटीका सम्बन्धका कुरा आऊन् या अन्य धर्म, संस्कृतिका कुरा होऊन् । हामीले देश, सहयोग र भाइचाराका विषयलाई सम्बोधन गर्ने बाहेक अन्य लालीपप या लठ्याउने औषधि कुनैलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन ।
भारतलाई थाहा छ, सन् १९९६ फेबु्रअरी १२ तारिखका दिन नेपाल र भारतबिच भएको महाकाली सन्धिमा समेत नेपालको सिमानालाई स्पष्ट पारिएको छ । यत्तिका दिनसम्म चुप बस्ने नेपाल आज किन जुर्मुरायो भन्ने एउटा एजेन्डा भिरेर भारतले चीनलाई तारो बनाउने षड्यन्त्रमात्रै रचेको देखिन्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा केही भारतीय सञ्चार माध्यमले अराजक र बर्बरयुक्त कुतथ्यको ठेली पस्किरहेका छन् । बाङ्गोटिङ्गो अर्थ लगाएर नेपालको भूमिलाई भारतकै हो भन्ने बनाउने भारतीय सञ्जाल मोटाउँदै गएको देखिन्छ । नेपालको भूमिबाट बाटो खन्दा, यत्तिका वर्षसम्म आफ्ना सेनालाई राखेर कब्जा गरिरहँदा हामीले अब पनि हाम्रो आत्मस्वाभिमानमा आँच आएको हेरेर बस्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा नेपाल त स्पष्टै छ । ढुक्कै पनि छ तर अबको बाटो नेपाली सक्षमतातर्पmको हुनुपर्छ ।
नेपालका सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले गर्ने गरेका ज्यादतीका विरुद्ध पनि कूटनीतिक कदम चाल्नु आवश्यक छ । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले भोगिरहेका अपमान, तिरस्कार र अत्याचारी कर्तुतका अराजक गतिविधिबाट मुक्त रहने बाटो खोज्नुपर्छ । नयाँ नक्सालाई स्वीकार नगरेर भारतले कृत्रिम र अतिरञ्जित जालो बुन्न थाल्ने हो भने त्यसका विषयमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानैपर्छ । अर्को पक्षबाट अब नेपालले आफ्नो सीमा क्षेत्रलाई यकिन गरेर सकेसम्म पर्खाल लगाउने र यदि त्यो असम्भव भएमा कमसेकम काँडे तारबार लगाउनेसम्मको कार्यका बारेमा विज्ञसँग बहस गर्नु आवश्यक छ । २०१८ सालमा नै कालापानीलगायतका भूभागमा जनगणना गर्नुहुने वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललगायतका व्यक्तिले दिनुभएका प्रमाण तथा नापी नक्साका आधिकारिक प्रमाण बमोजिम आफ्नो सुरक्षा आपैmँ अपनाउने बाटोमा सबैको सहमति होओस् । यसका लागि ‘जनता सीमा सुरक्षा कोष’ खोलेर सबै जनतालाई सहयोगको अपिल गर्ने हो भने नेपालले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रलाई आपैmँ सुरक्षित तुल्याउन सक्छ । सेनाको चौकीलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेदेखि नेपालले अब आत्मनिर्भरताको मार्गतिर पनि द्रुत गतिमा अघि बढ्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।